I Cfk Plate Rigid Plate Sheet Laminiate China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Cfk Plate Rigid Plate Sheet Laminiate - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Cfk Plate Rigid Plate Sheet Laminiate)
I-CNC carbon fiber sheet plate 3k surface
I-CNC carbon fiber sheet plate 3k surface Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
Ipulangwe Elakhiwe / Umkhiqizo we-Sheet SMC OEM Carbon Fiber
Ipulangwe Elakhiwe / Umkhiqizo we-Sheet SMC OEM Carbon Fiber Incazelo : Plate Egcwele Ye-Carbon Fibre Imininingwane yamanani : intengo incike kumklamo nobungako. Isikhumbuzi : pls usithumele umdwebo (ifayela le-.dxf / .step) Sidinga ukwazi ubukhulu bakho nobukhulu
Phezulu Ibanga Elakhiwe Nge-Carbon Fibre Plate
Phezulu Ibanga Elakhiwe Nge-Carbon Fibre Plate Incazelo : Plate Egcwele Ye-Carbon Fibre Imininingwane yamanani : intengo incike kumklamo nobungako. Isikhumbuzi : pls usithumele umdwebo (ifayela le-.dxf / .step) Sidinga ukwazi ubukhulu bakho nobukhulu
Ifektri eyenziwe nge-carbon fiber sheet / ifektri yepulani
Ifektri eyenziwe nge-carbon fiber sheet / ifektri yepulani Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber....
I-100% Yakha I-Carbon Fiber Plate Custom size Sheet
I-100% Yakha I-Carbon Fiber Plate Custom size Sheet Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza...
I Cfk Plate Rigid Plate Sheet Laminiate I-Cfk Plate Rigid Plate Sheet Laminiate I-Carbon Fiber Plate Panel Sheet 3k Ikhabethe le-Carbon Fibre Laminate I-Carbon Fiber Sheet Laminate Crp Sheets I-3K Carbon Fiber Plate Strip I-3K Plain Matte Carbon Fiber Sheet I-Blue Ring Nylon Self Lock Nut